အပျောက်စနစ်ဖြင့် တိုက်ခန်းဝယ်ယူခြင်းတွင် မြေငှားခပေးရန်လိုအပ်သလား။
[Unicode] အပျောက်စနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းသည် လွှဲပြောင်းပိုင်ခွင့်ဖြင့် ငှားရမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ လွှဲပြောင်းပိုင်ခွင့်ဖြင့် ငှားရမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ ငှားရမ်းသည့်ကာလသတ်မှတ်ချက်မရှိဘဲ အိမ်ငှားက ဥပစာလက်ဝယ်ထားပိုင်ခွင့်ကို ဝယ်ယူ၍ အိမ်ရှင်အား...
နေအိမ်အတွင်း ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်လေးတစ်ခု ဖန်တီးကြရအောင်!
[Unicode] တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒိုတွေမှာ နေထိုင်ကြပြီး လေကောင်းလေသန့်အတွက်ဖြစ်စေ ၊ အစိမ်းရောင်အပင်လေးတွေကို ချစ်မြတ်နိုးလို့ဖြစ်စေ ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်လေး၊ အပင်လေးတွေစိုက်ပျိုးချင်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် မိမိနေထိုင်တဲ့ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒိုတွေမှာ...
အဝတ်လျှော်စက်များကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ပေးသင့်သည့် အကြောင်း
[Unicode] လူသားတို့ရဲ့ နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာတာနဲ့အမျှ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများအကူအညီနဲ့ သက်တောင့်သက်သာ နေထိုင်နိုင်လာကြပါတယ်။ နေအိမ်တိုင်းလိုလိုမှာလည်း အဝတ်အထည်များကို လျှော်ဖွပ်ဖို့ အဝတ်လျှော်စက်များ သုံးစွဲလာကြပါတယ်။...
ပရိဘောဂဟောင်းတွေကို အသစ်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားအောင် လုပ်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
[Unicode] နှစ်တွေ ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပရိဘောဂတွေက ဟောင်းနွမ်းလာတတ်ပါတယ်။ ဒီလို ဟောင်းနွမ်းလာတဲ့ ပရိဘောဂတွေကို အသစ်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို စာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. (၁)...
ရှာလကာရည်ကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၁၀) မျိုး
[Unicode] ရှာလကာရည်ကို ဟင်းချက်ရာမှာတင်မကပဲ အလှအပရေးရာ၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ ထိရောက်စွာ အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။ ရှာလကာရည်ကို အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်စေဖို့ အသုံးပြုနည်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁....
[Unicode] “မြို့သစ်စီမံကိန်းထဲပါမယ့် မြေနေရာတွေဆိုပြီး၊ လယ်ယာမြေတွေကို ကွန်ကရစ်လမ်းတွေခင်း၊ ခြံဝန်းတွေ ခတ်ပြီး ရောင်းနေတယ်ဆရာ၊ အဲဒါတရားဝင်ပါသလား။ ပြီးတော့ မကြာမီ ကာလက ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ လယ်ယာမြေ ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေထွက်ထားတယ်လို့ ကြားတယ် ဆရာ၊ အဲဒီ...
အိမ်ခန်းတွင်းစိုက်ပျိုးထားတဲ့ အပင်လေးတွေအတွက် စိုက်ပျိုးထိန်းသိမ်းနည်း
[Unicode] ခေတ်မီတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်အခြေအနေအရကော၊ တိုး များလာတဲ့ လူဦးရေနေထိုင်မှုအရကြောင့်ပါ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ နေ ထိုင်မှုပုံစံတွေက မြေကြီးထုကြမ်းပြင်နဲ့ထိတွေ့ဖို့ ခက်ခဲသွားတဲ့အ ထပ်မြင့်အလုံပိတ် တိုက်ခန်းတွေနဲ့ နေထိုင်လာကြရတာများလာပါ တယ်။...
နေအိမ်သစ်မှာ နေထိုင်မယ့်သူတွေအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်တတ်ဖို့ သိထားသင့်စရာများ
[Unicode] ကဲ စာဖတ်ပရိသတ်တို့ရေ ... လာမယ့်လအနည်းငယ်ဆိုပဲ ဝါလကင်း လွတ် သီတင်းကျွတ်ကို ရောက်တော့မယ် ဆိုတော့ မင်္ဂလာရက်မြတ်မှာ လက်ထပ်မှု ပြုကြမယ့်သူတွေ၊ အိုးသစ်၊ အိမ်သစ်နဲ့ နေထိုင်ကြ မယ့်သူတွေ၊ နေရာထိုင်ခင်း အသစ်မှာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြမယ့်...
စာချုပ်တစ်စောင်ချုပ်ဆိုမည်ဆိုလျှင် အသိသက်သေများလက်မှတ်မစုံလျှင် တရားဝင်ပါသလား။
[Unicode] အရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊ အငှားစာချုပ်များ၊ အမွေစာချုပ်များ၊ မွေးစားစာချုပ်များနှင့် သေတမ်းစာများတွင် အသိသက်သေများပါ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်နှင့် လက်ဗွေနှိပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သက်သေခံဥပဒေ၊ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းဥပဒေနှင့် ပဋိညာဉ်ဥပဒေတို့တွင်...
အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းခွင့် လျှောက်ထားခြင်းမရှိဘဲ အိမ်ဟောင်းဖျက်ခွင့်ရှိသလား ?
[Unicode] အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းခွင့် လျှောက်ထားခြင်းမရှိဘဲ အိမ်ဟောင်းဖျက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ အဆောက်အဦ ဖြိုဖျက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၌ အဆောက်အအုံ ဖျက်သိမ်းခွင့် ဦးစွာလျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းခွင့် ခွင့်ပြုချက်ရမှသာ...